I-salad yezithelo yindlela ehle kakhulu yokupheka kanye ne-baking. Engeza ohlwini lwakho lokudla okudliwayo nsuku zonke kusuka ezicuceni ze-grapefruit ne-orange, okhethwe nge-yogurt ephansi yamafutha ne-nut crumb. Okuhlwabusayo, okunamanzi futhi, ngokungangabazeki, okuwusizo - okufana ne-vitamin "ibhomu" angeke nje kusize ekulwa namakhilogremu angaphezulu, kodwa futhi kuzokuvumela ukuba usinde ngenkathi engekho ngaphandle kwemakhaza. Asikho isikhathi sokupheka? Ungakwenza nge ijusi noma i-smoothies. Labo abaye bakhulisa ukuzwela kwepheshana lokugaya, kuyadingeka ukwengeza izinkezo ezimbalwa ze-buttermilk, i-avocado evuthiwe noma ukhilimu odwetshiwe kwisaladi.
Unganaki indima ye-citrus. Ukusuka kwendlalelo yayo engaphezulu kunokwenzeka ukwenza i-peel - akugcini nje ukuthuthukisa ukunambitheka kokusanhlamvu, ama-saladi namaqebelengwane okuzenzela, kodwa futhi kunomthelela ekwenzeni izinto eziphilayo ezingeni leselula. Uhlaka olumhlophe olufaka isikhumba kusuka ngaphakathi-albedo - umthombo wama-pectin: lezi zinto zithatha kalula amakhemikhali.
Faka phakathi kokudla kwakho, i-grapefruit kanye ne-pomelo - eyodwa ngosuku. Uma uzama ukukhipha amafutha, faka ekudleni umthambo walezi zithelo. Ngaphezu kokuqukethwe okungenani khalori, izithelo ze-citrus ziqukethe umthamo wokudabuka kwamavithamini A no-C, ama-antioxidants, i-lipolytic yemvelo ne-carotene - i-microelements, ehilelekile ekusebenzeni kwe-cellulite.
Uyathanda ama-orang nama-lime? Kuhle! Zijwayele uhlelo lokugaya nokuthuthukisa izinqubo zokusebenzisa umzimba - yingakho ukudla kwakho kungasebenza nakakhulu. Futhi ungakhohlwa ngama-tangerines kanye nama-ulamula - owokuqala unciphisa ukudla futhi kuthuthukise inhlalakahle, kanti okwesibili - kunomthelela omuhle esibindi, izinso nemithwalo yegazi.
Indlela yokuhlukanisa umdlavuza webele kusuka ku-cyst?
Iodine, indima yezinto eziphilayo emzimbeni
Indlela yokwenza imali kusukela ekuqaleni
Ukuthonya imikhuba emibi enganeni
Ukuphulukiswa nemikhiqizo yemilingo ye-variscite
I-pastry ye-puff ne-inyama enobuthi
Yiziphi izimiso zokukhetha umthambeli wengane?
Iziketi zeTutu: indlela yokudala isithombe esivumelanayo
Indlela yokulungisa umzimba wakho ukuze ukhulelwe
Isobho elibabayo nobhontshisi
Imibono yezipho ezingabizi zasekuqaleni
Izisebenzi ezidingekayo zesizukulwane esisha